Maxaa sababay isbeddelka cimillada sii kululaanaysa? - BBC News Somali
Image caption Calaamadaha iyo saameynta kuleylka adduunka
Calaamadaha iyo saameynta kuleylka adduunka ayaa si xooggan kor ugu kacaya, tijaabadii ugu dambeysay ee ku saabsan isbeddelka cimillada, ayaa la daabacay ka hor shirka lagaga hadlayo ee muhiimka ah ee Qaramada Midoobay ee ka dhacaya New York.
Xogta, oo ay soo aruurisay Ururka Saadaasha Hawada Dunida (WMO), ayaa sheegaya in shanta sano ee u dhexeysa 2014 illaa 2019 ay ahaayeen kuwii ugu kululaa abid.
Sare u kaca heerka badda ayaa si xawli ah u kacay isla muddadan gudaheeda, maadaama qiiqa CO2 uu ku dhuftay meel sare.
WMO waxay leedahay dedaallada goynta karboonka waa in si dhakhso ah loo xoojiyaa.
Arrimaha aan colaad ahayn ee Soomaalida ka qixiya guriyahooda
Waa maxay halista ugu weyn ee uu wajahayo bini'aadamka?
Bayaanka cimillada ayaa ahaa mid si wada jir ah loogu soo saaray tijaabadii ugu dambeeyay sababihii keenay iyo saameynta sii kordheysa ee heerarka diirimaadka aan horay loo arag sannadihii la soo dhaafay.
Aqoonsiga in heerkulka adduunku uu kor u kacay 1.1 darajo C illaa 1850, sidoo kale warqad aqooneedkan ayaa xustay inay kor u kacday 0.2C intii u dhaxeysay 2011 iyo 2015.
Tani waxay sabab u tahay qiiqa kaarboonka ee sii kordhaya, iyadoo qaddarka gaaska galay hawada intii u dhexeysay 2015 iyo 2019 uu ku kordhay 20% marka la barbar dhigo shantii sano ee la soo dhaafay.
Taas oo welwelka ugu badan ee daraasaddan uu yahay xogta ku saabsan kor u kaca heerka badda.
Heerka celcelis ee uu kor u kacay illaa 1993 illaa hadda waa 3.2mm sanadkii. Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo March 2014 illaa 2019 kor u kaca ayaa kordhay 5mm sanadkii. Muddadaa 10-ka sano ahayd laga soo bilaabo 2007-2016 waxay celcelis ahaan ahayd 4mm sanadkii.
Si kastaba, Heerka CO2 ee gaaska hawada ayaa dhaafay heer muhiim ah waxaana laga yaabaa inuu hoos u dhici waayo sanado badan.